Bedlula Inkulungwane -1,089 Asebetholakale BeleCOVID-19 eZimbabwe
Ekutshoneni kwelanga ngoLwesithathu, inani labakade sebefunyenwe beleCovid 19 eZimbabwe, beseledlula inkulungwane -1,089. Leli nani lengezwe ngabantu abangamatshumi amabili - 22, abatholakale belegciwane leli.
Asebesinde kulumkhuhlane sebengamakhulu phose amane -395.
Kuthi inani lasebehloliwe ukuba baleCovid 19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngoMbimbitho lonyaka, sebezinkulungwane ezedlula amatshumi ayisitshiyagalolunye - 95,860.
Emhlabeni jikelele asebetholakele beleCoronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi lantathu - 13,504,175, kuthi asebebulewe yileligciwane, sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha- 582,323, abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisitshiyagalombili- 7,892,195, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer.
Emazweni awezwekazi leAfrica asebebanjwe belegciwane leli, sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha- 625,702, labulala inkulungwane phose ezilitshumi lane- 13,797, kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu- 316,735, kubika abenhlanganiso ye African Union.